प्रेम प्रस्ताव कसरी राख्ने ? ख्याल गर्नैपर्ने केहि कुरा ! – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
प्रेम प्रस्ताव कसरी राख्ने ? ख्याल गर्नैपर्ने केहि कुरा !
माघ २६, २०७४ ०५:५५ मा प्रकाशित
२६ माघ । ‘प्रेम आँखाबाट सुरु हुन्छ र मनमा पुगेर टुगिन्छ ।’
प्रेमको सन्दर्भमा यसै भन्ने गरिन्छ । प्रेम आँखाले गर्ने कि मनले ? निसन्देह मनले । तर, यसको सुरुवात आँखाबाट हुन्छ । जब एकअर्कालाई देखिन्छ, मन पराइन्छ, आकषिर्त भइन्छ, भेटिन्छ, वात मारिन्छ । तब मनमा प्रेम अंकुराउँछ ।
प्रेम अन्धो हुन्छ भन्नुको अर्थ हो, सच्चा प्रेममा बाह्य व्यवधानहरु गौंण बन्छन् । त्यहाँ न जातले छेक्छ, न भूगोलले रोक्छ । न धनले अड्चन ल्याउँछ, न रुपले तगारो लगाउँछ।
तर, प्रेमको यो विन्दुसम्म आइपुग्नका लागि नव-यौवनाबीच आकर्षण हुनुपर्छ । त्यही आकर्षणले तानेर उनीहरुलाई यस्तो मिलनविन्दुमा पुर्‍याउँछ, जहाँ उनीहरु आत्मिक रुपले जोडिन पुग्छन् ।
एउटा अंग्रेजी भनाई छ, ‘वेल बिगन इज हाफ डन ।’
अर्थात कुनै कामको सुरुवात यदि राम्रो ढंगले हुन्छ भने, सम्झनुहोस् आधा बाजी जित्नुभयो । प्रेमको सन्दर्भमा पनि त यो लागु हुन्छ । प्रेमको सुरुवात प्रपोज अर्थात प्रस्तावबाट सुरु हुन्छ । तर, प्रस्ताव राख्ने भन्दैमा सोझै ‘आइ लभ यु’ भन्न सुहाउँछ त ?निश्चय पनि यो सुहाउने कुरा होइन । कसैलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नुअघि उनको मनोभावना बुझ्नुपर्छ । यदि आफुले मन पराएको व्यक्ति आफुप्रति सकारात्मक छ भने प्रस्ताव राख्न सकिन्छ । प्रेम प्रस्ताव भनेको प्रेम व्यक्त गर्ने हो । यसका विभिन्न माध्याम हुन्छन् । फूल दिएर हुनसक्छ, उपहार दिएर हुनसक्छ । वा कुनै रमाइलो शैली अपनाएर हुनसक्छ ।